မိုဒယ်လျော့ကားများမတင်သွင်းမိရန် oliac.com ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်... | CarsDB
မိုဒယ်လျော့ကားများမတင်သွင်းမိရန် oliac.com ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀င်ရောက်စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အကြံပြု
အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှစ၍ သတ်မှတ်မော်ဒယ်လျော့ကားများကို သိမ်းဆည်းပြစ်ဒဏ်နှင့် ဒဏ်ကြေးချ မှတ်မည်ဖြစ်ရာ မော်ဒယ်လျော့ကားများ မတင်သွင်းမိစေရန်အတွက် oliac.com ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြိုတင်ဝင် ရောက်စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အကြံပြုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို တင်သွင်းလာသည့်ကားများထဲတွင် ဂျပန်ပြည်တွင်းထုတ်ကားများကို အများဆုံးတင် သွင်းကြပြီး Chassis No. များကိုလည်းရိုက်နှိပ်ထားသည်။ Chassis No. များသည် ထုတ်လုပ်သည့် Manufacture Date ကိုဖေါ်ပြထားသည်။မြန်မာနိုင်ငံမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသူများအနေဖြင့် Manufacture Date ကို သိရှိစေရန်အတွက် https://www.oliac.com/autos/ တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်သိနိုင် သည်။
“ဂျပန်မှာ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ခုနှစ်အတိုင်း ထုတ်လုပ်ခုနှစ်ကို သတ်မှတ်ထားတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသူတွေအနေနှင့် မော်ဒယ်လွဲမှားမှုမဖြစ်ရအောင် လေလံဆွဲပြီးဝယ်ယူ မယ့်ကားရဲ့ Chassis နံပါတ်ကိုသိမယ်ဆိုရင် oliac.com မှာဝင်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့မသေချာ ဘူးထင်ရင် Chassis စာအုပ်နဲ့တိုက်ပြီးစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ oliac.com မှာထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ကို စစ်ဆေးမယ် ဆိုရင် ၉၈% က Chassis စာအုပ်နဲ့ကိုက်ညီတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်” ဟု အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက အကြံပြုပြောပြခဲ့သည်။
ထိုသို့ oliac.com တွင် Manufacture Date ကိုစစ်ဆေးလျှင် ကား၏ Chassis နံပါတ်ကို Find Year of Maunfarcer ၏အောက် ကွက်လပ်တွင်ရှိသော Enter Chassis No. တွင်ရိုက်နှိပ်ကာ Find Now ကိုနှိပ်ကာ ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်မော်ဒယ်လျော့ကားများကို ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်ရာတွင် ယာဉ်အို ယာဉ်ဟောင်း အစားထိုးပါမစ်နှင့်ဖြစ်စေ၊ Free Permit နှင့်ဖြစ်စေ တစ်နှစ်လျော့တင်သွင်းပါက 1 Year Down ကို 1/4 AV ၊2Year Down ကို သိမ်းဆည်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Rrf: Auto Mobile Journal မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
အောကျတိုဘာ ၁ ရကျမှစ၍ သတျမှတျမျောဒယျလြော့ကားမြားကို သိမျးဆညျးပွဈဒဏျနှငျ့ ဒဏျကွေးခြ မှတျမညျဖွဈရာ မျောဒယျလြော့ကားမြား မတငျသှငျးမိစရေနျအတှကျ oliac.com ဝကျဘျဆိုကျတှငျ ကွိုတငျဝငျ ရောကျစဈဆေးသငျ့ကွောငျး အကောကျခှနျဦးစီးဌာနမှ အကွံပွုသညျ။
မွနျမာနိုငျငံကို တငျသှငျးလာသညျ့ကားမြားထဲတှငျ ဂပြနျပွညျတှငျးထုတျကားမြားကို အမြားဆုံးတငျ သှငျးကွပွီး Chassis No. မြားကိုလညျးရိုကျနှိပျထားသညျ။ Chassis No. မြားသညျ ထုတျလုပျသညျ့ Manufacture Date ကိုဖျေါပွထားသညျ။မွနျမာနိုငျငံမှမျောတျောယာဉျတငျသှငျးသူမြားအနဖွေငျ့ Manufacture Date ကို သိရှိစရေနျအတှကျ https://www.oliac.com/autos/ တှငျ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုခွငျးအားဖွငျ့သိနိုငျ သညျ။
“ဂပြနျမှာ ကနဦးမှတျပုံတငျထားတဲ့ခုနှဈအတိုငျး ထုတျလုပျခုနှဈကို သတျမှတျထားတာ တှရှေိ့ရပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံကမျောတျောယာဉျတငျသှငျးသူတှအေနနှေငျ့ မျောဒယျလှဲမှားမှုမဖွဈရအောငျ လလေံဆှဲပွီးဝယျယူ မယျ့ကားရဲ့ Chassis နံပါတျကိုသိမယျဆိုရငျ oliac.com မှာဝငျရောကျစဈဆေးနိုငျပါတယျ။ တကယျလို့မသခြော ဘူးထငျရငျ Chassis စာအုပျနဲ့တိုကျပွီးစဈဆေးလို့ရပါတယျ။ oliac.com မှာထုတျလုပျတဲ့ခုနှဈကို စဈဆေးမယျ ဆိုရငျ ၉၈% က Chassis စာအုပျနဲ့ကိုကျညီတာကိုတှရှေိ့ရပါတယျ” ဟု အကောကျခှနျဦးစီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူ တဈဦးက အကွံပွုပွောပွခဲ့သညျ။
ထိုသို့ oliac.com တှငျ Manufacture Date ကိုစဈဆေးလြှငျ ကား၏ Chassis နံပါတျကို Find Year of Maunfarcer ၏အောကျ ကှကျလပျတှငျရှိသော Enter Chassis No. တှငျရိုကျနှိပျကာ Find Now ကိုနှိပျကာ ရှာဖှနေိုငျမညျဖွဈသညျ။
အကောကျခှနျဦးစီးဌာနမှ သတျမှတျမျောဒယျလြော့ကားမြားကို ပွဈဒဏျသတျမှတျရာတှငျ ယာဉျအို ယာဉျဟောငျး အစားထိုးပါမဈနှငျ့ဖွဈစေ၊ Free Permit နှငျ့ဖွဈစေ တဈနှဈလြော့တငျသှငျးပါက 1 Year Down ကို 1/4 AV ၊2Year Down ကို သိမျးဆညျးပွဈဒဏျခမြှတျသှားမညျဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
Rrf: Auto Mobile Journal မှ ကူးယူဖျေါပွသညျ။
Posted at: 20-10-2014 09:27 AM